Abaliqela Best House Izityalo - China Qingdao uKumkani Good New Materials
Abaliqela Best House Plants
Nangona kukho izityalo ezininzi eluhlaza banokudlala umoya ococekileyo, ngempumelelo ukususa indima longcoliseko ngaphakathi, kodwa izindlu ezilungiswe phantsi iikhemikhali ungcoliso, zekhala, Chlorophytum, Sansevieria kunye nezinye izityalo yeyona deodorant kakhulu zendalo.
izazinzulu NASA emva kweminyaka engama-20 uphando yafumanisa ukuba iimeko zokukhanya iiyure ezingama-24, imbiza zekhala ungakutshabalalisa cc 1 imitha womoya equlethwe 90% formaldehyde; iimbiza Chlorophytum ingaba izitovu, izixhobo zombane, iimveliso zeplastiki ukwabiwa carbon monoxide ne-nitrogen pheroksayidi wendele ndidiniwe, kodwa elizenzekelayo off 86% of formaldehyde; amagqabi kunye nezinye amagqabi namahlamvu sisityalo enkulu ukubamba ngaphezu kwe-80% ngeegesi endlwini eziyingozi. Ngoko ke, kwi-15 yesikwere seemitha igumbi lokuhlala, owakutyalayo, ababemelwe ezimbini Chlorophytum okanye Sansevieria, uyakwazi ukugcina umoya omtsha, kude formaldehyde engozini.
Ukongeza, le ivy ukubamba 90% ye-benzene; yeagave nga imginye-70% ye-benzene, 50% formaldehyde ne-24% ye trichlorethylene; ukuzihlalela blue nga kuginya 96% carbon monoxide, 86% formaldehyde. Nangona kumquat, nomrharnate, Mirabilis japonica kunye Haliotis diversicolor kwafuneka ukuxhathisa nyi hydrogen fluoride. Wisteria waba nenkani nyi sulphur dioxide, chlorine kunye hydrogen fluoride. Camellia, nomrharnate, Milan ngenxa yeKhlorini inetyhefu kakhulu, abe ethile Absorption kunye abekwe amandla; gardenia, nomrharnate, Milan ukubamba endlwini sulphur dioxide; sohlobo nomoya yerosemary endlwini ungenza iintsholongwane kunye ezincane Esona lincitshiswe.
Ukongeza kule ngentla apha kufuneka ibe iimeko zokukhanya ukubamba iigesi endlwini eziyingozi kwi iintyatyambo kwisityalo potted oluhlaza, kukho ezinye iintyatyambo ebusuku ekulihlambululeni emoyeni, ezo ngomvumbo Gaelan eqhelekileyo ngakumbi iintlobo wesundu mdaka, nivathise elifutshane oluhlaza, , uSuku, indebe ezimilise iingcambu, nepayina kulinywa kwaye tiger Pilan njalo njalo. Ngaphezu koko, le hlobo lwesityalo naye abe inzuzo ezicacileyo kakhulu - ukutyala elula nokugcinwa, nto leyo Kudla ngokuthiwa ukuba iintyatyambo "ukulinda elungileyo."